अमेरिकाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ - Himalayamail.com
अमेरिकाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष डा. खतिवडाले शपथ लिएका हुन् । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहित उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरु पनि उपस्थित थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडालाई सरकारले गत महिना राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ पछि उनको नियुक्ति गरिएको हो ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका खतिवडा अब छिट्टै अमेरिका जाने बताइएको छ ।
अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ नेपालले अनुमोदन गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला खतिवडा राजदूतका रुपमा अमेरिका जाँदै छन् । उनी अर्थमन्त्री हुँदासमेत विवाद नसुल्झिएपछि सरकारले संसदमा अनुमोदन गराउन सकेको छैन । खतिवडा एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
तर, संसदीय सुनुवाइका क्रममा भने उनले त्यो संसदको विषय भएको भन्दै संसद र सरकारले निर्देशन दिए मात्रै आफूले कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।